हिरोको भन्दा भिलेनको चर्चा
‘ऐश्वर्य’ फिल्मको मुख्य लगानीकर्ता अभिनेता रमेश उप्रेती हुन् । अमेरिका बसाइबाट स्वदेश फिर्तीसँगै उनले ‘ब्रासलेट’मार्फत् कमब्याक प्रयास गरेका थिए तर फिल्मले उनको कमब्याक सुखद बनाएन । तर, रमेशले हिम्मत हारेनन् । ‘ब्रासलेट’को कमी अर्को फिल्म खेलेर पूरा गर्ने गरि ‘ऐश्वर्य’ घोषणा गरे । ‘ऐश्वर्य’ बनेर पनि आउँदो बिहीबारबाट रिलिज भएकाे छ ।
ब्राइडल अवार्ड खड्कालाई
दक्षिण कोरियाको सोल सहरमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय मोडलिङ अवार्ड ‘लक्जरी ब्रान्ड मोडल अवार्ड’ अन्तर्गत रहेको ‘ब्राइडल अवार्ड २०१७’मा नेपालको प्रतिनिधित्व सिम्रन खड्काले गर्ने भएकी छन् । कोटेश्वरकी २० वर्षीया खड्कालाई नेक्स्ट मोडल्स नेपालले उक्त अवार्डमा पठाउन लागेको हो ।
७ वर्षपछि आर्यन सिग्देल र रेखा थापाको जोडी ‘रुद्रप्रिया’ मार्फत स्क्रिनमा आउँदा फिल्मले उधुम मच्चाउने अपेक्षा थियो । यही कारण निर्माताले आर्यन सिग्देललाई फिल्ममा लिन मोटो रकम खर्च गरेका थिए । तर, चाडपर्वको समयमा पनि फिल्मले सुख्खा व्यापार गरेर निर्माताको अपेक्षामा तुषारापात गरेको छ ।
पहिलो शेर्पा फिल्म
गीत, संगीत र चलचित्र क्षेत्रमा केही गर्ने हुटहुटीले सोलुखुम्बु, गुदेलकी आङङिमा शेपा ‘कुङ्गा’लाई काठमाडौँ ल्याइपु¥यायो । काठमाडौँको परिवेश उनले सोचेजस्तो सहज थिएन । जता फर्के पनि पैसाकै कुरो हुन्थ्यो तर उनको खल्तीमा आफूले इच्छाएका काम गर्न चाहिए जति पैसा थिएन ।
आशिष्मा पनि निर्माता
निर्माता बन्ने लिस्टमा हिरोइनको नाम थपिने क्रम जारी छ । अग्रज हिरोइनले निर्माण तथा निर्देशनमा सफलता हात पारेको देखेर होला अभिनेत्री आशिष्मा नकर्मीले पनि निर्माणमा हात हालेकी छन् । तर, आशिष्माले यसको सुरुवात गरेकी छन् नेवारी भाषाको फिल्म निर्माणबाट ।
‘फेस अफ फेसन’ फाइनल हुँदै
‘फेस अफ फेसन’को फाइनल आगामी २९ गते पोखराको सभागृहमा हुने भएको छ । ‘फेस अफ फेसन’ नाम दिएर रमाइलो छ प्रालिले आयोजना गरेको प्रतिस्पर्धामा दुई वटा अडिसन राउन्ड पार गरेर कुल ३४ जना प्रतिस्पर्धाबाट १७ जना युवायुवती फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन् ।
रेखा थापालाई नेपालको नम्बर वन कन्ट्रोभर्सी चाइल्ड भन्दा केही फरक पर्दैन । रेखा र विवाद पर्यायवाची जस्तै हुन् । जहिले पनि केही न केही लफडा परिरहन्छ । अझ फिल्म रिलिज हुने बेलामा त विवाद उधुमै हुन्छ । सधैं हुने लफडा यसपालि किन खेर जान्थ्यो र !
फिल्ममा सौगात खोइ ?
पछिल्लो समय युट्युबमा रिलिज भएका सामग्री हेर्ने हो भने लाग्छ, पूरै फिल्म उद्योग सौगातले धानेका छन् । दसैंअघि उनका पालैसँग ‘मेरो पैसा खोइ’, ‘फाटेको जुत्ता’, ‘झ्यानाकुटी’का प्रचार सामग्री रिलिज भए । अझ ‘मेरो पैसा खोइ’ र ‘फाटेको जुत्ता’का त दिन बिराएर ट्रेलर र गीत सार्वजनिक भए ।
उद्योगकै सेलिब्रेटी निर्देशक निश्चल बस्नेतसँग विवाह गरेर पनि स्वस्तिमा खड्काको फिल्मी करियरले सोचेजस्तो गति लिएको छैन । पहिलो फिल्म ‘होस्टल रिटन्र्स’ हिट नै भएको तर हिटको क्रेडिट सबै हिरोहरुले लिएर गए । सोलो हिरोइन भएको ‘लभ लभ लभ’बाट उनलाई खुबै आश थियो तर त्यो फिल्मले पानी पनि भन्न पाएन ।
‘म त सामान्य मान्छे हुँ तर क्यामरा लभ्स मि,’ चक्रपथस्थित घरमा बिहानीको चिया चुस्की लिँदै मनीषाले भनिन्, ‘मेकअप गरेपछि मात्र राम्रो देखिन्छु ।’ भदौ २३ को बिहानी मर्निङ वाकबाट फर्किएकी मनिषाको शिरमा ह्याट थियो, टि सर्ट, लेगिन अनि स्पोर्टस जुत्तामा रहेकी उनीसँग त्यही पहिरनमा वार्तालाप सुरू भयो ।
रेडियो नेपालको जागिर छाडेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा जाँदा कोमल वलीलाई धेरैले सचेत गराएका थिए, छँदाखाँदाको जागिर छाडेर राजनीतिमा गएको राम्रो हुन्न । कोमलको मामलामा शुभचिन्तकको चिन्ता नाजायज थिएन । स्थानीय चुनावमा वलीको पार्टी पत्ता साफ भयो ।
‘मावलमा काक्रो चोर्दा हात काट्यो’
मलाई दसैँ अरु चाड पर्वभन्दा विशेष लाग्छ । मेरो बाल्यकालको दसैँ निकै रमाइलो थियो । मिठो मिठो खाने नयाँ लुगा लगाउने भन्ने हुन्थ्यो । मलाई घाँघर निकै मन पथ्र्यो त्यसैले जसरी भए पनि ममीबुबालाई घुर्की लगाएर किनाइकन छाड्थेँ ।
तनाव लिने पालो वर्षाको
एउटै कलाकारका फिल्म एकै दिन रिलिज हुनु नेपालमा अब कुनै अनौठो रहेन । गए दिन कुनै न कुनै कलाकारका फिल्म एकै दिन रिलिज हुन्छन् । यस्तोमा कलाकारले एउटा फिल्मको पक्ष पोषण गर्न बाध्य हुन्छन् ।
‘चङ्गा उडाउँदा उडाउँदै छतबाटै लडेँ’
सानोछँदा दसैँ मलाई निकै रमाइलो लाग्थ्यो । दसैँ आउँदा हामी खुब रमाउँथ्यौँ । मेरो घर पूर्व झापाको बिर्तामोडमा हो । हजुरबुवा घरमा हुँदा पारिवारिक जमघट हुन्थ्यो । आफन्तको भिड हुन्थ्यो । घर नै मान्छेले भरिभराउ हुन्थ्यो । टीका लगाउनेको लाइन हुन्थ्यो ।
‘मावलको पिङबाट लड्दा हिलोमा पछारिएँ’
दसैँ आउँदा मलाई साह्रै खुसी लाग्थ्यो । घरमा बुबालाई खसी किन्न जाऊँ भनेर ढिपी गर्थें किनभने त्यो बेला खसी काट्ने भनेकै दसैंमा हुन्थ्यो । अरु बेला खासै काटिदैनथ्यो । त्यो बेलाको दसैमा मासुभात खाने सोख हुन्थ्यो ।
‘ दसैँ सधैँ रमाइलो लाग्छ ’
मलाई दसैँ सधैँ उस्तै लाग्छ । म सानैँ उमेरदेखि मावलमा बसेकी हुँ । मामाघरमा भए पनि दसैँ रमाइलो लाग्थ्यो । मेरो मावली थापाकाजी भएकाले दसैँका बेला अलिक बढी खसी काट्ने चलनथ्यो । टीकाको दिन गाउँका छरछिमेकी आफ्ना आफन्तहरु टीका ग्रहण गर्न आउने गर्थे ।
रेखाको दशैं स्मृति
‘ममीलाई दिएको दक्षिणा झुक्किएर मलाई पथ्र्यो। ’ बाल्यकालको दसैँ एकदम रमाइलो हुन्थ्यो किनभने बुबाले मलाई घरैमा पिङ लगाइदिनु हुन्थ्यो । पिङ खेल्दा ओहो कति रमाइलो रमाइलो ! घरभरि पाहुनै पाहुना, साह्रै रमाइलो लाग्थ्यो । दसैँको टीकाको दिन बुबाका आफन्त आउने, ममीका आफन्त टीका थाप्न आउनु हुन्थ्यो ।
आगामी असोज १६ गते धरानमा हुन गइरहेको मिस पूर्वाञ्चल २०१७ का अन्तिम प्रतिस्पर्धी ट्राफिक सचेतना अभियानमा लागेका छन् । गत शुक्रबार पूर्वको धरान र इटहरीमा प्रतियोगिताका १९ प्रतिस्पर्धीले यात्रुहरुलाई जेब्राक्रसबाट मात्र बाटो काट्न सिकाउँदै थिए ।
२ रुपैयाँको हल नछाड्ने दाउ
चाडपर्व फिल्म चल्ने उपयुक्त मौसम मानिन्छ । त्यसैले त क्यालेन्डरमा रातो देख्यो कि फिल्मवाला आफ्नो फिल्म रिलिज गर्न तँछाडमछाड गर्छन् । तर, अघिल्लो हप्ता रिलिज भएको फिल्म ‘२ रुपैयाँ’ले पनि दसैँसम्म फिल्म तन्काउन हप्ता सकिने बेलामा २ रुपैयाँमा फिल्म देखाउने अफर सुरु गरेको छ ।
बाघ निर्माताको दुम्सी चाला
दुम्सी यस्तो जनावर हो, जुन बेला उसलाई संकट पर्छ, उसले सुरक्षाका लागि काँडा ठाडो पार्छ र टाउको लुकाएर भाग्छ तर बाघ हिम्मतका लागि प्रख्यात छ । बाघ र दुम्सीको यो प्रसंग जोड्न खोजिएको हो, निर्माता छवि ओझाका लागि ।